အသားအရေ ကြည်လင်ရခြင်းအကြောင်း ..! - APANNPYAY
Home / အလှအပရေးရာ / အသားအရေ ကြည်လင်ရခြင်းအကြောင်း ..!
အသားအရေ ကြည်လင်ရခြင်းအကြောင်း ..!
Apann Pyay 11:33 PM အလှအပရေးရာ Edit
တစ်ခုသော ညဉ့်ဦးယံတွင် နတ်သားတစ်ယောက်ဟာ ဘုရားရှင်ထံရောက်လာပြီး မေးပါတယ်။ "မြတ်စွာဘုရား၊ တောထဲ မှာနေပြီး ကိလေသာငြိမ်းအေးပြီးကုန်သော၊ ကိလေသာငြိမ်းကြောင်းအကျင့်မြတ်တို့ကို ကျင့်ကုန်သော အရှင်မြတ်တို့ဟာ ဆွမ်း တစ်ထပ်တည်းသာ သုံးဆောင်ကြပါကုန်လျှက် အဘယ်ကြောင့် အသားအရေကြည်လင်နေပါသလဲဘုရား။
"နတ်သား၊ ထိုအရှင်မြတ်တို့ဟာ မရောက်လာသေးတဲ့ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘကိုလည်း ("ဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲ၊ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေ ဘယ်သူတွေကဖြင့်လာလှူကြမလဲဆိုပြီး") မတောင့်တကုန်။ သုံးဆောင်ပြီးသော ပစ္စည်းလာဘ်လာဘတို့၌လည်း (ဘယ်တုန်းကဖြင့် ဘယ်လိုစားသောက်ဖွယ်ကောင်းကောင်းတွေသုံးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုအကောင်းစား သင်္ကန်း၊ ဆေးဝါးစသည် လှူလို့ သုံးဆောင်ခဲ့ရတယ်စသည်ဖြင့်တွေးပြီး) မစိုးရိမ်ကြကုန်။ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဆဲ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘဖြင့် မျှတကုန်တယ်။ ဒါကြောင့် အသားအရေကြည်လင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဟု မိန့်တော်မူပါတယ်။
တကယ်တော့ သူမိုက်တွေ အသားအရေခြောက်ကပ်တယ်ဆိုတာ မရောက်လာသေးတဲ့ လာဘ်လာဘတွေကို တောင့် တကြတယ်။ ပြီးပြီးသော လာဘ်လာဘတွေကို ပြန်တမ်းတရင်း စိုးရိမ်ကြရတယ်။ ဒီအကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့် သူတို့ဟာ စိမ်းစိုနေတဲ့ကျူပင်ကို ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ခြောက်ကပ်နေသလို အသားအရေခြာက်ကပ်နေတာပါဟု ဟောတော်မူလိုက်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ လူတွေ ခန္ဓာကိုယ်အိုလွယ်တယ်။ ခြောက်ကပ်လွယ်တယ်ဆိုတာ အတွင်းကိလေသာတွေ အားကြီး လို့ပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟအားကြီးကြတော့ အသားအရေကပါ မစိုပြေဖြစ်ရတယ်။ ကိလေသာနည်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေမှာတော့ ဆေးဝါးမသုံးပဲလျှက် အသားအရေကြည်လင်နေပါတယ်။
Credit: ရွှေစမ်းမြေ အရှင်က၀ိဓဇသာရ
တဈခုသော ညဉျ့ဦးယံတှငျ နတျသားတဈယောကျဟာ ဘုရားရှငျထံရောကျလာပွီး မေးပါတယျ။ "မွတျစှာဘုရား၊ တောထဲ မှာနပွေီး ကိလသောငွိမျးအေးပွီးကုနျသော၊ ကိလသောငွိမျးကွောငျးအကငျြ့မွတျတို့ကို ကငျြ့ကုနျသော အရှငျမွတျတို့ဟာ ဆှမျး တဈထပျတညျးသာ သုံးဆောငျကွပါကုနျလြှကျ အဘယျကွောငျ့ အသားအရကွေညျလငျနပေါသလဲဘုရား။
"နတျသား၊ ထိုအရှငျမွတျတို့ဟာ မရောကျလာသေးတဲ့ ပစ်စညျးလာဘျလာဘကိုလညျး ("ဘယျခြိနျရောကျလာမလဲ၊ ဘယျလို ပစ်စညျးတှေ ဘယျသူတှကေဖွငျ့လာလှူကွမလဲဆိုပွီး") မတောငျ့တကုနျ။ သုံးဆောငျပွီးသော ပစ်စညျးလာဘျလာဘတို့၌လညျး (ဘယျတုနျးကဖွငျ့ ဘယျလိုစားသောကျဖှယျကောငျးကောငျးတှသေုံးဆောငျခဲ့တယျ။ ဘယျသူက ဘယျလိုအကောငျးစား သင်ျကနျး၊ ဆေးဝါးစသညျ လှူလို့ သုံးဆောငျခဲ့ရတယျစသညျဖွငျ့တှေးပွီး) မစိုးရိမျကွကုနျ။ ပစ်စုပ်ပနျဖွဈဆဲ ပစ်စညျးလာဘျလာဘဖွငျ့ မြှတကုနျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အသားအရကွေညျလငျနကွေခွငျးဖွဈတယျဟု မိနျ့တျောမူပါတယျ။
တကယျတော့ သူမိုကျတှေ အသားအရခွေောကျကပျတယျဆိုတာ မရောကျလာသေးတဲ့ လာဘျလာဘတှကေို တောငျ့ တကွတယျ။ ပွီးပွီးသော လာဘျလာဘတှကေို ပွနျတမျးတရငျး စိုးရိမျကွရတယျ။ ဒီအကွောငျးနှဈမြိုးကွောငျ့ သူတို့ဟာ စိမျးစိုနတေဲ့ကြူပငျကို ဖွတျလိုကျတဲ့အခါ ခွောကျကပျနသေလို အသားအရခွောကျကပျနတောပါဟု ဟောတျောမူလိုကျပါတယျ။
ဆိုလိုတာကတော့ လူတှေ ခန်ဓာကိုယျအိုလှယျတယျ။ ခွောကျကပျလှယျတယျဆိုတာ အတှငျးကိလသောတှေ အားကွီး လို့ပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟအားကွီးကွတော့ အသားအရကေပါ မစိုပွဖွေဈရတယျ။ ကိလသောနညျးအောငျကငျြ့နတေဲ့ သူတျောကောငျးတှမှောတော့ ဆေးဝါးမသုံးပဲလြှကျ အသားအရကွေညျလငျနပေါတယျ။
Credit: ရှစေမျးမွေ အရှငျကဝိဓဇသာရ